MSS 3: နက်နဲခြင်းမှဖွင့်ဟဖော်ပြခြင်းသို့ - Zomi Adventist Innkuan
ဇန်နဝါရီ ၁၁ – ၁၇
ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၁
ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ဒံ၊ ၂း၁-၁၆။ တ၊ ၁ရး၂၈။ ဒံ ၂း၁၇-၄၉။ ဆာ၊ ၁၃၈။ ယောဟန် ၁၅း၅။ တရားဟော ၃၂း၄။ ၁ပေ ၂း၄။
”ထိုအခါ ဒံယေလသည် ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်၊ ဘုရားသခင်၏နာမတော်သည် ထာဝရ မင်္ဂလာရှိပါစေသတည်း။ အစွမ်းသတ္တိနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံတော်မူ ၏” (ဒံယေလ ၂း၂ဝ)။
ရေပြင်ပတ်လည်ဝန်းရံထားသော ”ဂရင်းလန်း” (ွမနနည ူညေိ) ၌ ရေခဲတုံးများအရွယ်အစားမျိုးစုံ စီးမျောနေသည်။ အချို့သောအချိန်များတွင် ရေခဲတုံးအသေးများသည် ရေခဲတုံးကြီးများ၏မျောပါရာစီးကြောင်း၏ဆန့်ကျင် ဖက်ဘက်သို့ ပြောင်းပြန် စီးဆင်းနေကြောင်းတွေ့ရတတ်သည်။ သမုဒ္ဒရာ၏ ရေးစီး ကြောင်းအတိုင်းမျောနေသော ရေခဲတုံးကြီးများ စီးမျော နေရာမှ တိုက်ခတ် လာသောရေပြင်လေသည် ထိုစီးကြောင်း၏ဆန့်ကျင်ဖက်၌ တိုက်ခတ်လာ သောကြောင့် ရေခဲတုံးအသေး များပြန်၍ ပြောင်းပြန်စီးနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ရာဇဝင်သမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်သောအခါ၌လည်း တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပေါ် ပျက်စီး ခြင်းသည် ရေပြင်လေ တိုက်ခတ် သောအခါ သမုဒ္ဒရာစီးကြောင်းနှင့် ဆန့်ကျင်စီးမျောသော ရေခဲတုံး ကလေးများနှင့် အလားသဏ္ဌာန် တူညီနေသည်။ ရေပြင်လေကိုအစဉ်ပြောင်းလဲနေ၍ ကြိုတင်တွက်ဆ၍မရသောလူသားများ၏ စိတ်အစဉ်ကို ပုံဆောင်ထားသည်။ စိတ်တစ်ခု၏စေရာကို အခြားတစ်ခုမှ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ပြီး ပြောင်းလဲစေတတ်သည်။ သမုဒ္ဒရာ ရေစီးကြောင်း တမျှ အားအင်ကြမ်းတမ်းနေပါစေ၊ ရေပြင်လေ၏တိုက်ခတ်မှုကြောင့် လမ်းကြောင်း လွဲသွားတတ်သည်။ ၎င်းမှာ ထာဝရ ဘုရားရှင် ၏ဉာဏ်တော်နှင့် အုပ်စိုးခြင်း အကြံတော်ပင်ဖြစ်သည်။ အယ်လင်ဂျီဝှိုက်မှ ”မရေမတွက်နိုင်သောနဂါးငွေ့တန်း မှ ကြယ်တာရာစီးဆင်းကြောင်းတွင် ကြယ်ကလေးများ မိမိလမ်းကြောင်း အတိုင်း လည်ပတ်သွားလာနေသလို ဘုရားရှင်သည် မိမိ၏ အကြံအစည် တော်ကို အလျင်စလိုမရှိ၊ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိ စီစဉ်ညွှန်ကြားတော်မူ၏။ (DA, p. 32).
တိုင်းနိုင်ငံများ၊ လူ၏အတွေးအခေါ်များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီး များ၏ဖြစ်ပေါ်ပျက်ပြားသွားခြင်းသည် လူသားများ၏ ရူးသွပ်မှုကိုသာ ညွှန်ပြ သည်။ ဒံယေလအခန်းကြီး (၂) တွင် ဒံယေလသည် ကမ္ဘာ့ရာဇဝင်ကြီး၏ စီးဆင်းကြောင်းကို ကောင်းကင်ဘုံတွင် ကိန်းဝပ်တော်မူ၍ ထာဝရဘုရားသခင် သာ အလုံးစုံကိုစီရင်နေတော်မူကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တနင်္ဂနွေ ဇန်နဝါရီ ၁၂
ဒံယေလ ၂း၁-၁၆ ကိုဖတ်ပါ။ ဘုရားရှင်မှ ရှင်ဘုရင်ကိုပေးသော အိပ်မက်ကြောင့် ဟေဗြဲလူတို့မည်သို့သောပြဿနာနှင့် ပတ်သက်ရင်ဆိုင်ရ သနည်း။
ရှေးခေတ်အချိန်၌ အိပ်မက်မက်ခြင်းကို အထူးအလေးထားသောကိစ္စ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အိပ်မက်အတိတ်နိမိတ်ကြောင့် ကပ်ဘေးများကျရောက် တတ်သည်ဟု အယူရှိကြသည်။ နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည် မိမိကိုယ်တိုင် မြင်မက်ခဲ့သောအိပ်မက်ကိုပင် လုံးဝသတိမရဖြစ်နေသောအခါ အလွန် စိတ်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသည်။ ဗာဗုလုန်လူမျိုးအထူးကျွမ်းကျင်ပညာတတ်သူများ သည် အိပ်မက်၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ၎င်းတို့၏နတ်ဘုရားများက သေချာ ပေါက်ဖော်ပြပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ယူဆကြသည်။ သို့သော် ဒံယေလ ကြားဝင်လာရခြင်းအကြောင်းမှာ ရှင်ဘုရင်သည် မိမိ၏အိပ်မက်ကိုပင် လုံးဝ သတိမရမေ့လျော့နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆက်၍ ရှေ့သို့တိုး၍မရသောအခြေ အနေတွင် အိပ်မက်ကဝိပညာရှင်များသည် ရှင်ဘုရင်အား ”အရှင်မင်းကြီး မေးမြန်း တော်မူသော အရာသည် ခက်ခဲသောအရာဖြစ်ပါ၏။ လူပကတိနှင့် မဆက်ဆံသောဘုရားမှတစ်ပါး အဘယ်သူမျှ အရှင်မင်းကြီး ရှေ့တော်၌ မထုတ် မဖော်နိုင်ပါဟု တစ်ဖန်ပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏” (ဒံ၊ ၂း၁၁)။
ရှင်ဘုရင်အမျက်ပြင်းစွာထွက်ကာ ဗာဗုလုန်အတွင်းရှိပညာရှိအပေါင်း အား ”သုတ်သင်ရှင်းလင်းစေ” ဟုအမိန့် တော်ထုတ် လိုက်၏။ ထိုဖြစ်စဉ်မျိုး သည် ရှေးခေတ်သက်ဦးဆံပိုင်ပဒေသရာဇ်မင်းများကျင့်သုံးတတ်၍ မဖြစ်ဖူး သောကိစ္စ မျိုးလည်း မဟုတ်ပါ။ ရာဇဝင်၌လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကြောင့် ပထမမြောက်ဒါရိမင်းကြီးသည် မာကုပညာရှိအားလုံးကို သုတ်သင် ခဲ့ဖူးသည်။ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သောတံတားကျိုးကျခြင်းကြောင့် ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာ များကို ဇေရဇ်မင်းကြီးမှ သေဒဏ်ပေး ခဲ့သော အဖြစ်များရှိခဲ့သည်။ နေဗုခဒ်နေဇာ မင်းကြီးအမိန့်တော်ထုတ်သောအခါ၊ ထိုအတောအတွင်း၌ပင် ဒံယေလနှင့်အဖော် များသည် ဘုရင်နန်းတော်တွင်ပညာရှိအဖြစ် စတင်ခန့်အပ်ထားခြင်းခံရရုံသာ ရှိသေး၏။ ထိုကိစ္စပြဿနာကြောင့် ရှင်ဘုရင် ထုတ်ပြန် လိုက်သော အမိန့်သည် သူတို့အားလည်းအကျုံးဝင်သက်ရောက်နေသည်။ မူရင်းဘာသာစကား၏ ရေးသားချက်၌ သေဒဏ်ကို ချက်ချင်း စတင်လုပ်ဆောင်ပြီး ဒံယေလနှင့်အဖော် များဆီသို့ရောက်လာကာ သတ်ပစ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
သို့သော် လည်း ဒံယေလသည် ”ဉာဏ်ပညာအကြံနှင့်ပြည့်” စုံသူဖြစ်ရကား (ဒံ၊ ၂း၁၄)၊ အာဏာပါးကွက်သားများကိုကြီးမှူးရသော ကိုယ်ရံတော် အာရုတ်ထံချက်ချင်း ချဉ်းကပ်မေးမြန်းသည်။ ဒံယေလသည် ရှင်ဘုရင်ရှေ့တော်သို့ဝင်ပြီး နက်နဲသော အိပ်မက်ကိစ္စကို ဖော်ပြပေးပါမည်ဟု အာမဘန္တေခံယူလျက် အချိန် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ရှင်ဘုရင် မင်းကြီး သည် ဗေဒင်မျက်လှည့်ဆရာတို့အချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်းဆိုသောအခါ၌ လုံးဝလက်မခံပါ။ သို့သော် ဒံယေလ တောင်းဆိုသောအချိန်ကိုမူ ကြည်ဖြူစွာ လိုက်လျော လက်ခံလိုက်သည်။ ဒံယေလသည်လည်း ဗေဒင်မျက်လှည့်ဆရာများ နည်းတူ ဤအမှုမှာ လူသားစင်စစ်ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိထားသည့် အပြင်၊ ထာဝရဘုရား သခင်ဖော်ပြအနက်ပေးကာ အိပ်မက် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမည်ဟု တစ်ထစ်ချယုံကြည်ထား၏။
ဘုရားအကြောင်းရှာဖွေသူများသည် ထာဝရဘုရား၏အတွင်း၌တည်ရှိ ကိန်းဝပ်သော နဂိုဇာတိတော်အကြောင်းကို ဆွေးနွေး ပြောကြားကြသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရသောအရာများနှင့်ကွဲပြားနေသော်လည်း ဘုရားရှင်သည် ၎င်း အရာများနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ နေတော်မူသည်။ နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကို အိပ်မက်ပေးခြင်း အကြောင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှင်၏ နဂိုဇာတိ သဘောအကြောင်း မည်သို့နားလည်စေနိုင်သနည်း။ (တမန်တော် ၁ရး၂၈)။
တနင်္လာ ဇန်နဝါရီ ၁၃
ဒံယေလသည် ချက်ချင်းပင်မိမိ၏အဖော်များကိုခေါ်ကာ ဆုတောင်း ခြင်းအမှုကိုစတင်တော့သည်။ မိမိ၏ အဖော်များ အားလည်း ဘုရားသခင်သာ အိပ်မက်ကိုမဖော်ပြလျှင် သူတို့အားလုံးအသတ်ခံရကြမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြ ၏။ ပြဿနာ ကြီးကြီး မားမားနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်အပ်နှံပြီး မဖြေရှင်းနိုင်ဟုထင်ရသော ကိစ္စ ပြဿနာကို ကိုယ်တော်ရှင်ဖြေရှင်းပေးမည်ကိုသိမှတ်ပါ။
ဒံ၊ ၂း၁၇-၂၃ ကိုဖတ်ပါ။ ဆုတောင်းခြင်းပြုသောအမှုနှစ်မျိုးမှာ မည်သည်တို့ဖြစ်ပါသနည်း။
ဆုတောင်းရခြင်းအကြောင်းကို ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် ကျမ်း၏အခန်းကြီး (၂) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပထမတစ်မျိုးမှာ ဒံယေလသည် ဘုရားရှင်အား အိပ်မက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကိုဖော်ပြပေးရန် ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ (ဒံ၊ ၂း၁၇-၁၉)။ မည်သည့် စကားမျိုးဖြင့် ဆုတောင်းသည်ကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် ဒံယေလနှင့်အပေါင်းအဖော်တို့သည် ”ငါတို့သည် အခြားသော ဗာဗုလုန် ပညာရှိ တို့နှင့်အတူ မသေမပျောက်စေခြင်းငှာ ဤနက်နဲသောအရာ၌ ကရုဏာကျေးဇူး တော်ကိုခံရမည်အကြောင်း ကောင်းကင်ဘုံ ရှင်ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းကြ ကုန်အံ့ဟုပြောဆိုကြ၏” (ဒံ၊ ၂း၁၈)။ သူတို့သည် ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို လေးစားစွာ ပြုလုပ်ဆုတောင်းခြင်းကြောင့် ဘုရားရှင်သည် ရှင်ဘုရင်၏အိပ်မက် နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ပြတော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုတောင်းခြင်းပြုသော အခါ ”ကရုဏာကျေးဇူးတော်ကိုခံရမည်အကြောင်း ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားသခင်ကို” ဆုတောင်းကြရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့မသိနားမလည်နိုင်သောအရာ ၏အဖြေကို ဘုရားရှင်ဧကန်ပေးလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ် သောဘုရားနှင့် ဒံယေလကိုးကွယ်သည့်ဘုရားသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားရှင်သည် ဆုတောင်းခြင်းကိုနားညောင်းတော်မူ၍ လိုသမျှကို သိရသောအခါ ဒံယေလနှင့်အပေါင်းအဖော်တို့သည် လွန်စွာဝမ်းမြောက်လျက် ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်းဆုပတ္ထနာဖြင့် ထာဝရဘုရားအား ပြန်၍ချီးမွမ်းကြသည်။ ဘုရားရှင်အား ချပေးသနားတော်မူသောပညာဉာဏ် နှင့် ကိုယ်တော်သည် သဘာဝနှင့်နိုင်ငံရေးရာအလုံးစုံကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း သူတို့ချီးမွမ်းကြသည်။ ဤနေရာ၌အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိ သင်ယူနိုင်သည်။ ထာဝရဘုရားရှင်ထံဆုပတ္ထနာတောင်းလျှောက်သောအခါ၊ အမျိုးစုံသောကောင်းချီးများကို တောင်းခံကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြန်၍ ကျေးဇူးတင် ချီးမွမ်းခြင်း အကြိမ်မည်မျှပြုလုပ်ဖူးသနည်း။ ယေရှုရှင်နှင့်နူနာရောဂါ ခံစားရသူ (၁ဝ) ဦးအကြောင်း၌ လူတို့သည် ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းရန်မေ့တတ် ကြ၏။ ဆယ်ဦးလုံး ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသော်လည်း တစ်ဦးတည်းသော သူသာလျှင်ပြန်လာ၍ ”ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းငှာ” (လုကာ ၁ရး၁၈) ပြုလုပ်၏။ ဒံယေလသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုသတိပေးချက်မှာ ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းရုံသက်သက်ဖြင့်မပြီးသေးဘဲ၊ ဘုရားရှင်၌ရှိသော စာရိတ္တ တော်ကိုလည်းဖော်ပြပေးသည်။ ကိုယ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းချိန်၌ ကျွန်ုပ် တို့အလွန်စိတ်အားကြီးစွာ လိုအပ်ချက်အပေါ်ဘုရားရှင်ပေးမည်ကို အသေအချာ ယုံကြည်ရပါမည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်ကိုအစဉ်ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းကြ ရမည်။
ဆာလံ ၁၃၈ ကိုဖတ်ပါ။ ကျမ်းချက်တွင်ပါရှိသောဆုတောင်းချက် အတိုင်း သင်၏အမှုကိစ္စ၌ ဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းရန်မလိုသော အချက်များရှိပါသလား။
အင်္ဂါ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄
ရုပ်ထုကြီး (အပိုင်း ၁)
ဒံ၊ ၂း၂၄-၃ဝ ကိုဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်သတိရစေရန် အလွန် အရေးကြီးသောအချက်ကို ဒံယေလမည်သို့သတိပေးပြောခဲ့သနည်း။ (ယောဟန် ၁၅း၅ ကိုလည်းဖတ်ကြည့်ပါ။)
ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို ဘုရားရှင်တုံ့ပြန်ခြင်း၌ အိပ်မက်နှင့်၎င်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုဖော်ပြတော်မူသည်။ ဒံယေလသည် ထိုနက်နဲသောအမှုကို ကောင်းကင်ဘုံအရှင်ထာဝရဘုရားထံမှလာကြောင်းကို အလျင်စလိုဘုရင်ကြီး အားမပြောပြသေးချေ။ အိပ်မက်နှင့်အိပ်မက်၏ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို ဦးစွာ ရှင်ဘုရင်ကိုမဖော်ပြမီတွင် လွန်ခဲ့သောရက်များ၌ မင်းကြီးအနေဖြင့် အိပ်ရာ ပေါ်တွင်ဆောက်တည်ရာမရ အိပ်၍မပျော်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မင်းကြီးစဉ်းစားခဲ့သော အကြောင်းများကို ဦးစွာပြောပြခဲ့သည်။ ထိုသို့အစချီပြောပြခဲ့သောအခါ ရှင်ဘုရင် အတွက် ပို၍ပို၍စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုကိစ္စကိုဘုရင် မင်းကြီးတစ်ပါးတည်းသာသိရှိနေသောအရာဖြစ်၏။ ဒံယေလသည် ထိုအကြောင်းကို သဘာဝထက်ကျော်လွန်နေသောတန်ခိုးရှင်ထံတော်မှ ရရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒံယေလသည် အိပ်မက်အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြကာ အခြားနှစ်လိုဖွယ်မကောင်းသောပြဿနာကို ထပ်၍ဆောင်းပေးလိုက်ပြန်၏။ အကြောင်းမှာ အိပ်မက်၏ရလဒ်သည် နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးအဖို့ မလိုလား အပ်သောအကျိုးဆက်များသာ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ မင်းကြီးအတွက် ကောင်းသော သတင်းများမဟုတ်ပါ။
See also LESSON 7: Buaina Hong Om Ciangin
ဒံ၊ ၂း၃၁-၄၉ ကိုဖတ်ပါ။ အိပ်မက်၏အဓိပ္ပါယ်သည် နေဗုခဒ်နေဇာ မင်းကြီး၏ဗာဗုလုန်နိုင်ငံအတွက် မည်သို့ကံကြမ္မာဖန်လာမည်ဟုထင်ရှား သနည်း။
အိပ်မက်အရ၊ ရုပ်ထုကြီး၌ ”ဦးခေါင်းသည် ရွှေစင်ဖြစ်၏။ ရင်ပတ် နှင့်လက်နှစ်ဘက်သည် ငွေဖြစ်၏။ ဝမ်းဗိုက်နှင့်ပေါင်နှစ်ဖက်သည် ကြေးဝါ ဖြစ်၏။ ခြေသလုံးနှစ်ဘက်သည် သံဖြစ်၏။ ခြေဖဝါးနှင့်ခြေဖမိုးသည် သံတစ်ပိုင်းသရွတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်၏” (ဒံ၊ ၂း၃၂၊၃၃)။ ”ကျောက်တစ်လုံးသည် သံနှင့်သရွတ်ဖြစ်သော ရုပ်ထု၏ခြေကိုထိခိုက်၍. . . (ဒံ၊ ၂း၃၄)၊ ရုပ်ထု တစ်ခုလုံးသည် နွေကာလ၌ကောက်နယ်တလင်းအမှုန်ကဲ့သို့ လေတိုက်၍ ပျောက်လေ၏။ ဒံယေလသည် သတ္တုတစ်မျိုး စီ၏အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ထားပုံနှင့် တည်ရှိလာမည့်တိုင်းနိုင်ငံတို့၏ပျက်စီးသွားမည့်အကြောင်း၊ အစားထိုးဝင်ရောက် လာမည့်အကြောင်းနှင့်ဆိုင်သည့် ကမ္ဘာ၏ ရာဇဝင်ကို မင်းကြီးအားတစ်ဆင့် ပြီးတစ်ဆင့်လျှောက်ကြားလေ၏။ နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးအဖို့အရာမှာ အလွန် မှပင်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်အဖြေကိုရရှိပြီ။ ဗာဗုလုန်တိုင်း ပြည်ကြီးသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော သယံဇာတနှင့် နေနှင့်လကဲ့သို့ထွန်းပြောင်ခဲ့သောဘုန်း တော်ရောင်ခြည်များ ပျောက်လွှင့် ကွယ်ပျောက်သွားရမည်မှာ မုချဖြစ်သည်။ နောင်လာ မည့်တိုင်းပြည်နိုင်ငံများသည်လည်း မတည်မြဲဘဲ၊ အချိန်တန်လျှင် ရွှေ့သွားရမည်သာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထာဝရ ဘုရား၏ နိုင်ငံတော်သည်သာ အစဉ်ထာဝရတည်မြဲလိမ့်မည်။
လူသားတို့ ၏ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှန်သမျှ မတည်မြဲကြောင်းကိုသတိပြုပါ။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ယေရှုရှင်၌ ကျွန်ုပ်တို့ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်ထားရှိ ရန်၊ ယေရှုရှင်သာအားကိုးမှီခိုရန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း မည်သို့သွန်သင်ထားသနည်း။ (ယောဟန် ၆း၅၄။ ၂ကော ၄း၁၈ ကိုကြည့်ပါ။)
ဗုဒ္ဓဟူး ဇန်နဝါရီ ၁၅
ရုပ်ထုကြီး (အပိုင်း ၂)
အိပ်မက်နှင့်ယင်း၏အနက်ကိုတစ်ဖန်ပြန်၍ဖတ်ပါ။ (ဒံ၊ ၂း၃၁-၄၉)။ ထာဝရဘုရားသည် ကမ္ဘာ့ရာဇဝင်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အကြောင်းကို ကြိုတင် သိနှင့်ထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သို့သွန်သင်ထားသနည်း။
နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီး၏အိပ်မက်နှင့်အစပြုပြီး အနာဂတ္တိဟောထား ချက်များကို ဆက်လက်၍အသေးစိတ်အနေဖြင့် ဒံယေလ ၇၊၈၊၁၁ တို့၌ ထပ်မံဖော်ပြပြန်သည်။ (ဒံ၊ ၂) သည် အခြေအနေအရပေးထားသော ပုရောဖက်ပြုချက်မျိုးမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်းအနာဂတ္တိဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားရှင်၏ကြိုတင်မြင်တွေ့ထားသော ဧကန်အမှန်ဖြစ်လာမည့် အနာဂတ်အကြောင်းများကို တိတိကျကျကြိုတင်ဟောထားသည်။
၁။ ရွေဦးခေါင်းသည် ဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်ကိုပုံဆောင်သည်။ (၆၂၆-၅၃၉ ဘီစီ)။ ဗာဗုလုန်၏တန်ခိုး၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ပုံဆောင်ရန် ရွှေထက် ကောင်းသောအခြားသတ္တုမရှိနိုင်တော့ပါ။ သမ္မာကျမ်းတွင် ‘ရွှေမြို့တော်’ (ဟေရှာယ ၁၄း၄)၊ ထာဝရဘုရားကိုင်တော်မူ၍ မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုယစ်မူး စေသောရွှေဖလားဖြစ်၏။ (ယေရမိ ၅၁း၇) ကို ဗျာဒိတ် ၁၈း၁၆ နှင့်နှိုင်းယှဉ် လေ့လာကြည့်ပါ။ ရှေးခေတ်ရာဇဝင်သုတေသီ ”ဟီရိုဒိုတပ်စ်” မှ ဗာဗုလုန် မြို့သည် ရွှေကိုများစွာသုံးပြီးတန်ဆာဆင်သောမြို့ဟု သမိုင်းမှတ်တမ်းပြု ထားသည်။
၂။ ရင်ဘတ်နှင့်လက်နှစ်ဖက်သည် ငွေဖြစ်သောရုပ်ထု၏အနက် ပုံဆောင်သည့်တိုင်းပြည်မှာ မီဒိုပါရှန် (၅၃၉-၃၃၁ ဘီစီ)။ ငွေသည် ရွေလောက်တန်ဖိုးမရှိပါ။ မီဒိုပါရှန်အင်ပါယာသည်လည်း ဗာဗုလုန်အင်ပါယာ ၏အဆောင်အယောင်ကို လုံးဝလိုက်မမီပါ။ ငွေသတ္တုသည်လည်း ပါရှန် အင်ပါယာ၏အမှတ်အသားဖြစ်သည့်အကြောင်းမှာ အခွန်ငွေများကို ငွေသား ဖြင့်အသုံးပြုပြီးကောက်ခံခဲ့သည်။
၃။ ဝမ်းဗိုက်နှင့်ပေါင်နှစ်ဘက်သည် ကြေးဝါဖြစ်၏။ ၎င်းကို ”ဂရိ” (၃၃၁-၁၆၈ ဘီစီ) ဖြင့်ပုံဆောင်၏။ ယေဇကျေလ ၂ရး၁၃ တွင် ဂရိလူမျိုး များ ကြေးဝါအသုံးအဆောင်များသုံးစွဲကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဂရိစစ်သည် တော်များသည် ကြေးဝါခမောက်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဒိုင်းလွှားများ၊ စစ်ပွဲ သုံးရဲတင်းပုဆိန်များကို ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်သုံးစွဲကြသည်။ အီဂျစ်မင်း ဆန်မီတီကပ် (၁) (ဏျောာနအငခ့ကျ ှု) သည် ဂရိစစ်တပ်၏ချီတက်ဝင်ရောက် လာမည့်ပုံစံကို ”ပင်လယ်ထဲမှ လာသောကြေးဝါလူသားများ” ဟု ကြိုတင်မြင်ခဲ့ သည့်အတိုင်းပြည့်စုံခဲ့သည်ဟု သမိုင်းဆရာကြီး ဟီရိုဒိုးတပ်မှ မှတ်သား ထားသည်။
၄။ ခြေသလုံးနှစ်ဖက်သည် သံဖြစ်၍၊ ရောမနိုင်ငံကိုပုံဆောင်ထား သည်။ (၁၆၈ ဘီစီ-၄၇၆ အေဒီ)။ ဒံယေလ၏ရှင်းလင်းချက်အရ၊ သံသည် ကျိုးပဲ့ကြေမွစေနိုင်သောသတ္တိတန်ခိုးရှိသည့် ရောမအင်ပါယာကိုပုံဆောင်ထား သည်။ ရှေးမှဖြစ်ခဲ့သောအင်ပါယာကြီးများထက် သက်တမ်းပိုမိုကြာရှည်သည်။ ရောမအင်ပါယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန် အလိုက်ဖက်ဆုံးသတ္တုမှာ သံပင်ဖြစ်သည်။
၅။ ခြေဖဝါးနှင့်ခြေဖမိုးသည် သံတစ်ပိုင်း၊ သရွတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်၍ ဥရောပနိုင်ငံများပြိုကွဲသွားခြင်းကိုပုံဆောင်သည်။ (၄၇၆ အေဒီမှ ခရစ်တော် ကြွလာသည်အထိ) ဖြစ်သည်။ သံနှင့်သရွတ်ကိုပေါင်းစည်းခြင်းဟုပုံဆောင် ရာ၌ ရောမအင်ပါယာပြိုကွဲပြီးနောက်အဖြစ်အပျက်များနှင့် လုံးဝကိုက်ညီနေ ပါသည်။ ဥရောပကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့်ကြိုးစားခဲ့ကြ သည်။ တော်ဝင်မျိုးနွယ်ချင်းလက်ဆက်ထိမ်းမြားပေးကာ စည်းလုံးမှုကိုကြိုးစား ကြသော်လည်း ယနေ့တိုင်စည်းလုံး၍မရပါ။ ကွဲပြားမှုများဆက်ခါဆက်ခါ ရှိနေမြဲဖြစ်သည်။ ပုရောဖက်ဟောကြားချက်အရ၊ ထာဝရဘုရား၏နိုင်ငံတော် တည်ထောင်သောအချိန်အထိ ထိုကွဲပြားမှုသည်ရှိနေမည်သာဖြစ်သည်။
ကြာသပတေး ဇန်နဝါရီ ၁၆
ဒံ ၂း၃၄၊၃၅၊၄၄၊၄၅ ကိုဖတ်ပါ။ ၎င်းကျမ်းချက်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာကြီး၏ကံကြမ္မာသည် မည်သို့အဆုံးသတ်သွားမည်ကို သွန်သင်ထားပါ သနည်း။
အိပ်မက်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ”နောင်လာမည့်နေ့ရက်များ” (ဒံ၊ ၂း၂၈) အတွက် ဖြစ်ပျက်မည့်အရာကို ကြိုတင်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အဖိုးထိုက်တန်သောသရွတ်မြေအထိ ပြောင်းလဲဆင်းသက်ရာ၊ လူလက်ဖြင့်မထု မလုပ်သောကျောက်တုံးကြီးဟုပုံဆောင်သည့် နိုင်ငံတော်တစ်ခုတည်ထောင်လာ လိမ့်မည်။ ရုပ်ထုကြီး၏ဦးခေါင်းမှခြေဖျားအထိ ထုလုပ်ထားသောသတ္တုတိုင်း သည် လူလက်ဖြင့်ထုလုပ်ခြင်းခံရပြီး ကျလာသောကျောက်တုံးကြီးမှာမူ လူလက်ဖြင့်မလုပ်ကြောင်း အိပ်မက်၌မြင်ရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လွန်လေ ပြီးသောတိုင်းနိုင်ငံအသီးအသီးများ တည်ထောင်ပျက်စီးသွားခြင်းရှိသော်လည်း အဆုံး၌ကျောက်တုံးကြီးနှင့်ပုံဆောင်ထားသောနိုင်ငံတော်သည် အစဉ်ထာဝရ တည်မြဲသွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခိုလှုံရာ ကျောက်ဆောင်ဟု တင်စားပုံဆောင်တတ်သည်။ (တရားဟော ၃၂း၄။ ၁ရာ ၂း၂။ ဆာလံ ၁၈း၃၁။ ၎င်းအပြင် ထိုကျောက်တုံးကြီးသည် မေရှိယအရှင် ကိုလည်းပုံဆောင်ထားသည် (ဆာလံ ၁၁၈း၂၂။ ၁ပေ ၂း၄၊၇)။ သို့ဖြင့် ထိုကျောက်တုံးကြီးကို ဘုရားသခင်၏ထာဝရနိုင်ငံတော်နှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါက အခြားနှိုင်းယှဉ်စရာမည်သည့်အရာမျှမရှိတော့ပါ။
အချို့သူများက ထိုကျောက်တုံးကြီးသည် သခင်ယေရှု၏လောက အမှုတော်ဆောင်ရာအချိန်ကာလဟု စောဒကတက်ငြင်းခုံပြောဆိုတတ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိသတင်းစကား ကမ္ဘာအနှံ့ ရောက်ရှိကြီးစိုးနေကြောင်းဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ထိုကျောက်တုံးကြီးသည် ကမ္ဘာ့အင်ပါယာ လေးခုတည်ရှိပြီးနောက်မှ ပြန်လည်စည်းလုံး၍မရ၊ ကွဲပြား သောအချိန်တွင်ရောက်လာသောကျောက်တုံးကြီးဖြစ်သည်။ ရုပ်တု၏ခြေဖဝါး နှင့်ခြေဖမိုး ကိုပုံဆောင်သော ခေတ်အချိန်ဖြစ်သည်။ ပထမရာစုနှစ်အတွင်းဖြစ် ခဲ့သောအကြောင်းဖြစ်၍ ၎င်းအချိန်တွင်အုပ်ချုပ်မင်းပြုနေသူမှာ ရောမအုပ်စိုး ချိန်ဖြစ်ကာ သခင်ယေရှုလောက ၏အမှုတော် ဆောင်ရွက်နေချိန်ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထနိုင်ငံတော် (အင်ပါယာ) အချိန်လည်းဖြစ်သည်။
သို့သော် လူလက်ဖြင့်မထုမလုပ်သောကျောက်တုံးကြီးသည် ရုပ်ထုကို ထိပြီးနောက် တောင်ကြီးသဖွယ် အရွယ်ကြီးမားသွားသည်။ ”ရုပ်တုကိုထိခိုက် စေသောကျောက်မူကား၊ တိုးပွားသဖြင့် တောင်ကြီးဖြစ်၍ မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး ကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟု မြင်မက်တော်မူ၏” (ဒံ၊ ၂း၃၅)။ ထွက်ပေါ်လာသော တောင်ကြီးသည် ဇိအုန်တောင်ကြီးကိုဆိုလိုပါသည်။ ဗိမာန်တော်တည်ထား သောနေရာတောင်ကြီးဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦ၏အင်္ဂတေများကို ဘုရားရှင် ၏လောကတိုင်းနိုင်ငံဟု ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအချိန်၌ပုံဆောင်ထားသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတောင်ပေါ်မှပဲ့ကျလာသောကျောက်တုံးကြီးသည် နောက်ထပ် တောင်ကြီးတစ်တောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျမ်းချက် မှရည်ညွှန်းထားသောတောင် ကြီးသည် နဂိုရှိထားနှင့်သောတောင်၊ ကောင်းကင်ဇိအုန်တောင်ကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်တဲတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ဥခင် ခရစ်တော်ကြွလာ၍ မိမိ၏နိုင်ငံ တော်ကိုတည်ထောင်မည့်အချိန်ကိုလည်းကောင်း ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ယေရုရှလင်မြို့သစ်ကြီးသည် ကောင်းကင် မှဆင်းသက်လာမည်ဟု (ဗျာဒိတ် ၂၁း၁-၂၂း၅) တွင်ဖော်ပြသည့်အလျောက် ထိုနိုင်ငံတော်ကြီးသည် ဧကန်မုချ တည်ရှိလာရမည်။
ဒံယေလ ၂ မှဖော်ပြထားသောတိုင်းနိုင်ငံအားလုံး မှန်ကန်တိကျစွာ ပေါ်ထွက်တည်ရှိလာပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပိတ်ထာဝရနိုင်ငံတော်သည် ဧကန်မုချ၊ ျွှိကျ မှန်ကန်စွာ တည်ရှိလာမည်ဟု ကြိုတင်ဟောထားသည့် ပုရောဖက်ဟောကြားချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့မယုံကြည်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ ထာဝရဘုရား၏ထာဝရနိုင်ငံတော်သာ ကျန်နေတော့သည်မဟုတ်လားမိတ်ဆွေ။ ပုရောဖက်အနာဂတ္တိပြုချက်များကို မယုံကြည်စရာအကြောင်း အဘယ်ကြောင့် ရှိနေမည်နည်း။
သောကြာ ဇန်နဝါရီ ၁၇
ဒံယေလအခန်းကြီး (၂) ၏ဖော်ပြသောရုပ်ထုကြီးကို ရွှေနှင့်ငွေဖြင့် သွန်းလုပ်ထားရာတွင် အဓိပ္ပါယ်မှာ၊ ငွေကြေးစီးပွားရေးနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိသည်။ ကြေးဝါသံတို့နှင့်သွန်းလုပ်ထားခြင်းမှာလည်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းနှင့်လက်နက် ကိရိယာများ ပြုလုပ်သုံးစွဲသောသတ္တုများဖြစ်သည်။ သရွတ်သည်လည်း ရှေးခေတ်ကာလ၌ စာပေရေးသားရန်နှင့် အိမ်အသုံးအဆောင်အိုးခွက်ပန်းကန် များကိုသုံးစွဲကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုကြောင့် ရုပ်ထု၏တည်ဆောက်ပုံအရ၊ လူသားများကို အကျိုးပြုစေရန်အတွက် သတ္တုပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အထင်ရှားဆုံးသောရုပ်ထု၏ရည်ရွယ်ချက်မျာ တိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်တည်လာမည်။ ထိုတိုင်းနိုင်ငံများ ပျက်သုဉ်းသွား ရမည့်နိမိတ်ဖြစ်သည်။ ”လူ၏လက်ဖြင့်မလုပ် သောကျောက်တုံးကြီး” (ဒံ၊ ၂း၄၅) သည် သဘာဝဖြစ်စဉ်ထက်သာလွန်ပြီး တန်ခိုးကြီးသော သဘာဝလွန် တန်ခိုးကြီးသည် နောက်ဆုံးမှရောက်ရှိလာပြီး၊ လူသားများနေထိုင်ရာယခုကမ္ဘာသို့ လူသားထုကြီးကို ကောင်းကျိုးများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
”လူသားများမမြင်နိုင်သောဉာဏ်မှာ သမိုင်းရာဇဝင်တစ်လျှောက် အားအင်တန်ခိုးဖြင့်တည်ဆောက်လာသည်၊ ပြန်၍ပျက်စီးသွားသည်။. . .
သို့သော် ဒံယေလ၏အတည်ပြုချက်၌ အရာအားလုံး၏နောက်ကွယ် ၌ ဘုရားသခင်ချုပ်ကိုင်ထားတော်မူကြောင်း ကိုယ်တော်သည် အထက်မှ ငုံ့ကြည့်နေ၍ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရှိကြ ရမည်။ William H. Shea, Daniel: A Reader’s Guide (Nampa, ID: Pacific Press, 2005), p. 98.
Prev post HSS 3: THURUK ATANGA THUPUAN
Next post ZSS 4: Meikhuk Pan Kumpi Inn-ah